समाचार Archives | Page 10 of 59 | fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
Home » समाचार (page 10)
2017-11-09	Leaveacomment 100 Views
२३, कार्तिक । बेलायतको हाउ अफ लर्डस्मा यस हप्ता १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई फेसबुक तथा ट्वीटर चलाउन रोक लगाउने विषय पनि बहसमा सामेल गरियो । बालबालिकालाई निश्चित उमेरपछि मात्र सोसल मिडियामा अनुमति दिने विषयलाई डाटा सुरक्षण अध्यादेशमा सामेल गर्ने विषय बहसमा आयो । यो कानूनबाट सानो उमेरका बालबालिकालाई सोसल मिडियाको माध्यमबाट हुने शोषणबाट जोगाउन सकिने तर्क गरिएको छ । योसँगै एक ...
2017-11-09	Leaveacomment 140 Views
बाँके, २३ कात्तिक । पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा हावाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने काम सुरू गरिएको छ । बाँकेको खजुरामा हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन सुरू भएको छ । साविकको मध्यपश्चिमाञ्चको बाँके, सुर्खेत र जुम्लाका साथै सुदूरपश्चिमको अछाममा हावाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना सुरू भएको हो । हावाबाट बिजुली निकाल्न सकिने देखिएपछि हाल सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उपकरण जडान गर्ने काम भइरहेको ...
2017-11-09	Leaveacomment 136 Views
पोखरा, २३ कार्तिक । राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला २०७४ को प्रचार प्रचार तथा व्यवस्थापनको लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधीमण्डल राजधानी प्रस्थान गरेको छ । संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेको नेतृत्वमा काठमाण्डौं गएको टोलीमा संघका उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्की, महासचिव दामु अधिकारी, कोषाध्यक्ष पवनकुमार प्रजापति र उपमहासचिव अर्जुन पोखरेल सहभागी हुनुहुन्छ । राजधानी बसाईको क्रममा प्रतिनिधीमण्डलले आउँदो पुस २७ गतेदेखि माघ ८ ...
2017-11-09	Leaveacomment 125 Views
जाडो याम सुरु भइसकेको छ । यतिबेला उच्च रक्तचापका समस्या झेलिरहेकाहरु थप सर्तक हुनुपर्छ । किनभने जाडोमा उच्च रक्तचापको जोखिम बढी हुन्छ । त्यसैले जाडो याममा उच्च रक्तचापको जोखिमबाट बच्न सर्तकता अपनाउनुपर्छ । जस्तो कि, नियमित रक्तचाप परिक्षण गर्ने, नियमित औषधी सेवन गर्ने, पोषिलो खानेकुरा खाने, झोल एवं जुसको सेवन गर्ने गरौ । साथै शरीरमा आवश्यक तापमान कायम गर्नुपर्छ । ...
2017-11-09	Leaveacomment 379 Views
काठमाडौ,२३,कात्तिक । अति दुर्लभ रोगका कारण युगान्डा तथा केन्याका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । उत्तरी युगान्डाको केविन राज्यमा एउटै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको हो । उनीहरुको मृत्यु मारवर्ग नामक भाइरसको संक्रमणमा भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले जनाएको छ । डब्लुएचओका अनुसार मारवर्ग भाइरस इबोलसित सम्बन्धित छ । यी दुवै भाइरस ‘फिलोभाइरस’ प्रजातीको हो र यसको मृत्युदर उच्च छ । ...
2017-11-09	Leaveacomment 152 Views
चलचित्र ‘अग्नीदहन’को फस्टलुक रिलिज गरिएको छ । काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा केही फरक शैलीको फस्टलुक रिलिज गरिएको हो । ‘मान्छे बोक्सी हुन्न कहिल्यै राष्ट्रिय जागरण प्रतिष्ठान’सँगको सहकार्यमा निर्माण भएको यो चलचित्रलाई घनश्याम लामिछानेले निर्देशन गरनुभएको हो । यो चलचित्रलाई बोक्सी प्रथा अझै उन्मुलन नभएका स्थानमा प्रदर्शन गरिने यसको निर्माणपक्षले बताएको छ । यो चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता कोवित शरण उपाध्याय हुनुहुन्छ ...
2017-11-09	Leaveacomment 167 Views
सबैले खोज्ने राम्रो हो । अझ राम्री युवतीको चर्चा सबैभन्दा बढी हुन्छ । कतिपयलाई आफ्नै सुन्दरताले पनि दुःख दिन्छ । अर्थात् आफ्नै सुन्दरता अभिषाप बन्छ । धेरैलाई सुन्दा यो अचम्म लाग्न सक्छ । तर रुसकी एक युवतीलाई भने यस्तै भएको छ । २६ वर्षीया एन्जेलिका केनोभा धेरै सुन्दर भएकै कारण घर भित्रै कैद भएकी छिन् । एन्जेलिकाका अभिभावकले उनलाई घरबाट ...
2017-11-09	Leaveacomment 145 Views
रोनाल्डोले आफूले सधै मेसीलाई पछि पार्ने दाबी गरेको भोलिपल्टै मेसीले रोनाल्डो विश्व फुटबलबाट सकिएको जवाफ दिएका छन् । बार्सिलोनाका स्टार लिओनेल मेसीले आफ्नो तुलना अब रोनाल्डोसँग हुनै नसक्ने दाबी गर्दै यस्तो आलोचना गरेका हुन् । यो सिजनमा लिगका सुरूका चार खेल प्रतिबन्धका कारण गुमाएका रियल मड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिष्टियोनो रोनाल्डोले स्पेनिस ला लिगामा एक गोल मात्रै गरेका छन्। मेसीले भने १२ ...
2017-11-09	Leaveacomment 120 Views
पेटको अल्सर कस्तो रोग हो ? पाचन प्रणालीसँग जोडिएको यो एउटा खास रोग हो । यसमा आमाशय, खाने नली या सानो आन्द्राको सुरुको भाग अर्थात डयुडिनम मा घाउ वा प्वाल हुन्छ । पेटको अल्सर का कारणहरु के के हुन् ? १. धेरै मानसिक तनाव, चिन्ता, क्रोधमा रहनु, अनियन्त्रित खाना खानु । धेरै रक्सी पिउनु, खाली पेटमा दुखाइ हटाउने दबाइ खाने ...
2017-11-09	Leaveacomment 158 Views
काठमाडौं, २३,कार्तिक । एमाले अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सम्झना गरनुभएको छ । बिहीबार बिहान चावहिलस्थित एवान पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले देवकोटा भएको भए आज एमालेको पक्षमा कविता लेख्नेर उल्लेख गरनुभयो । ओलीले भन्नुभयो, ‘देवकोटा हुनु भएको भए आज यस्तो कविता लेख्नुहुन्थ्यो.. कुन पार्टीमा जान्छोँ साथी हो ? कुन ...